Comiket Onyinye Ọbara Na-enye Aka Feminists - Ndị Ọzọ
Comiket Bloodrive Onyinye Nta Ahụhụ Mgbe Pandering Iji Feminists Na West
A maara Comiket na uhie uhie maka mkpọsa ọbara ha na Japan, iji mee ka ndị mmadụ nye onyinye ọbara.
Nke a abụghị ihe nzuzo.
Ma mgbe esemokwu kpaliri site n'ebe ọdịda anyanwụ feminists na Twitter banyere Ọbara Uzaki Chan na 2019, Comiket kpebiri ime ihe 'na-echebara' echiche.
comiket uhie uhie ụgbọ ala
komiket ụgbọ ala ịkwọ ụgbọ ala
Mgbasa ozi dị na bọs ha dịka ọmụmaatụ - nwere “obere” obere onyonyo nke ụmụ agbọghọ anime.
Ha nwere ike ọ bụghị B be na ụgbọ ala niile ọnụ n'ihi na ha dị nnọọ omimi site n'ebe dị anya.
Nakwa - ụmụ nwanyị nwanyị anime na-ajụ mmiri ka ejiri obere olu mee ka mmiri nwee obi ụtọ na ụmụ nwanyị na-enweghị nchebe na Twitter.
N'agbanyeghị ihe a niile na-enweghị isi na-atụgharị uhie uhie na Comiket mere, enwere ndị na-ahụ maka ụmụ nwanyị ọdịda anyanwụ (na USA) na-eme mkpesa banyere ihe odide ahụ 'mara mma' karịa inwe mmekọahụ.
Ma ọ bụ ndị ọzọ okwu: ihe a nile bu ihe ichoro ma ha choro ihe ha ga-eme mkpesa.
E kwuwerị - nke a bụ maka njikwa na nlebara anya na-achọ.
'Kenketsu no Susume' nke ndi ozo eweregoro. Echere m na nke a bụ ebe iji dobe akwụkwọ mmado onyinye ọbara, mana ọ dị ka ụfọdụ ndị ka bụ NG. Ọ bụ ihe m ji eme mkpebi n’onwe m, yabụ, m ga-ajụ obere gbasara nyocha ụmụ nwanyị. pic.twitter.com/RnuwJyIja3
- Tetsuo Kashiwagi ∃xist (@ tkore61) Ọnwa Iri na Otu 2, 2019
Nke a bụ nsụgharị:
Akpọrọ m ya asị.
“Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ndị ọrụ nwoke nọ ya yabụ ọ bụrụ 50/50.
“G in i mere o ji b ur u naan i um u nd i na-eto eto mara mma? Kedu ihe bụ ebumnuche ya ebe a? Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu. A na-egosipụta ụdị ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ n'ime onyinye onyinye ọbara n'ụzọ aghụghọ. Enwere mmetụta nke iwe iwe na ịhụ ha otu a, ee? Inye onyinye ọbara abụghị ụdị ọrụ ahụ. ”
ga-ahụ ihe nkiri oge niile
Ihe nzuzu dị ebe a bụ nke a enweghi ihe ọ bụla gbasara inye ọbara nye ụmụ mmadụ REAL na Japan.
Nke ahụ bụ isi ihe nke mkpọsa ahụ.
Ihe odide Anime adighi adi ma ekwesighi ka ha di, ya mere akụkọ ifo.
> Dinkpụrụ mara mma mara mma (na-enweghị ngosipụta ma ọ bụ okwu mmekọahụ) ihe ịrịba ama na mgbasa ozi.
Nke a bụ eziokwu.
N'agbanyeghị ihe Obodo #Gaze Anaghị atụkwasị Femi obi n'ihi na ha kụrụ. pic.twitter.com/iNfBczkRRy
- Zen (@dainodoragon) Ọnwa Iri na Otu 24, 2019
Na iche iche Tweet onye nwere ọgụgụ isi na-ekwu, sị:
'Nke a bụ ihe kpatara na ndị nwanyị anaghị atụkwasị obi.'
O kwudosiri ike.
Ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ụmụ nwanyị America ndị na-awakpo ihe ọ bụla na-eme ka ha nwee obi iru ala enweghị ike ịtụkwasị obi.
Onweghi ihe ha na-eme mkpọsa, mkpesa, ma ọ bụ na-eti mkpu na Twitter na-enwe ihe ọ bụla dị mkpa ma ọ bụghị ezigbo nsogbu na-emetụta n'ezie ndị mmadụ.
Ha bu oke onu mmadu ndi mmadu mebiri emebi ma na-ekwu ugbu a Nwoke obula (ma obu umu agbogho anime n'okwu a) nke egosiputara n'uzo bu misogynistic ma na-egbu egbu.
Ọ bụ ihe nwute na enwere mkpụrụedemede n’enweghị nnwale. Nke a bụkwa n'ihi na chilling utịp? https://t.co/9RQymXMoCM
- Takeyoshi Takamura #WalkAway (@tk_takamura) Jenụwarị 1, 2020
Ihe dị njọ banyere Red Cross na Comiket na-agbanye azụ na atụmatụ anime ha. Na pandering ka feminists adịghị mkpa ndị mere mkpesa Ọbụna mgbe ha nwetara ihe ha chọrọ, bụ mmadụ ga-anwụ dị ka mkpebi a.
Mgbasa ozi ahụ bụ Mpekarị ihe ịga nke ọma karịa Ọbara Ọbara Uzaki site na ọdịiche sara mbara. Isi okwu nke usoro ịchụ ọbara bụ inye ndị nọ ná mkpa ọbara.
Yabụ n'ihi nke a - onye ọ bụla nke na-ata ahụhụ n'ihi omume ndị a ziri ezi na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị nwere ike ịnwụ.
Ọ bụrụ na nke ahụ emee - ụmụ nwanyị na-eche banyere onwe ha bụ ndị na-enyeghị sh *, ma Red Cross ga-abụ ihe kpatara ya.
Enwere ụzọ ime ya.
Kpụrụ mara mma mara mma (na-enweghị ngosipụta ma ọ bụ okwu mmekọahụ) ihe ịrịba ama na mgbasa ozi.
Nnwere onwe ikwu okwu nke ndị dike anaghị amasị nke a, nri?
Ọ́ bụghị ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha ịchọrọ imeghe ma foto ma ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ?
Ọ bụ ya mere e ji achịkwa ya.
- Master & # x1f48b; & # x1f496; (@kyunoyakatachan) Ọnwa Iri na Otu 24, 2019
Ndị dị otú a na-ata ụta.
Nke a bụ kpọmkwem ihe kpatara ya mmachi, ịda mba, na izizi ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ihe jọgburu onwe ya.
Ọ dịghị ezi ihe na-esite na ya, belụsọ ime ka mmadụ ole na ole “nwee mmetụta” ka mma banyere nsogbu ha na-enweghị njikọ, na-emejọ ọtụtụ ndị na-ata ahụhụ.
Ozi akụkọ: Noriyuki Oru.
Ihe kpatara United Nations ji alụ ọgụ iji machibido Anime anaghị eme uche
Nsogbu nke Anime Feminists Na West (Na Zoro Ezo Agenda)
New Crunchyroll Original Trailer maka Onyx Equinox Na-egosi Agha Dị n'etiti Chi Aztech
in Ndị Ọzọ
Ọ bụrụ na Want Chọrọ Ihe Dị Iche, Ndị a “Karneval” Quotes Wll Do The Trick
3 Ndụ Ihe Mmụta Site Jellal Fernandes Naanị Fairy Tail Fans Ga-aghọta
Inuyasha Omuma 39 Nke Ga-eweghachi Mmetụta Ahụ
A machibidoro Germany iwu Redo nke onye na-agwọ ọrịa, Ugbu a, ọ bụ Amazon Kachasị Arịrị Na Otu Obodo
Okwu Piccolo 4 sitere na DBZ nke juputara na amamihe
Ezigbo ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ Good Smile, Nendoroid Zelda: Ume nke Anụ Ọkụ dị maka iwu tupu!
Ihe omume 10 + na Naruto Nke Mere Uzumaki Onye Ọ Bụ Taa
Ọ bụrụ na ’re banye na Romance Anime, Lelee Nisekoi Nkọwa 42 + a
2 Gourry Gabriev Quotes nke juputara n’obi oma na amamihe
Top iri kacha mma oge niile
Anime dika emere na abis
enwere otu ihe saiyan na-eme ka mpako ya dịrị
kacha mma Anime ndepụta niile oge
animes ebe dub di nma
Copyright © Ikike Niile Echekwabara | mechacompany.com